China Osisi super bass USB Bluetooth Bluetooth 2.0CH stereo audio ụda Hi-Fi hifi bookshelf ọkà okwu (BT-106) Nlụpụta na ụlọ ọrụ | Eyin
Osisi super bass USB bluetooth 2.0CH stereo audio sound Hi-Fi hifi bookshelf ọkà okwu (BT-106)
Ngwunye Ike: AC110V ~ 240V 50-60Hz
Nkeji ụgbọala: 4 ″ x2 + 1 ″ x2
Mmepụta Ike: 60W
Azịza Frequency: 60Hz ~ 20KHz
Nha ngwaahịa: W160xD220xH275MM
Ọrụ: Bluetooth / AUX IN / Optical / AUX OUT / USB
• 1XAUX INPUT - Njikọ dị mma na ngwaọrụ ọ bụla nwere arụmọrụ isi nke 3.5mm ma ọ bụ mmepụta RCA abụọ.
• versiondị Bluetooth- Mfe ijikọ ngwaọrụ site na Bluetooth ka ịnụ ụtọ egwu dị mma.
• USB Input-Play music site na ngwaọrụ USB.
• SLỌ SLỌ NT --R ST STLỌ - Naturalda ụda nke sitere na 13mm silk dome tweeter na 4 nke anụ ọhịa zuru oke.
• AKW WKWỌ AKW CLKWỌ AKW CLKWỌ - qualitydị mma MDF osisi wuru nke a rụchara vinyl na-eje ozi dị ka nnukwu ekele maka ihe ndozi ụlọ ọ bụla.
BT-106 ndị na-ekwu okwu akwụkwọ na-agụ akwụkwọ jikọtara anya ochie na ụdị ọgbara ọhụụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ọnụ na vasatail bookshelf ọkà okwu na-akwadoghị ụda BT-106 bookshelf ọkà okwu bụ gị na-aga-2.0 ọkà okwu usoro. Igosipụta ọkwọ ụgbọ ala bass 4 nke anụ ọhịa na ọdụ ụgbọ mmiri edozi, flared bass reflex, sistemụ okwu okwu akwụkwọ a na-anapụta ọkwa siri ike, bass bara ụba nke jupụtara na ọnụnọ na omimi. Ikwupụta ụda ikwesị ntụkwasị obi na arụmọrụ nke BT-106 bụ nrọ ọ bụla. Ọtụtụ Edifier ahịa na-eji anyị BT-106 kwadoro bookshelf ọkà okwu maka ejikọta ha turntables maka kasị mma audio ahụmahụ. Nwee ọmarịcha vinyl gị mgbe ị na-enwe ọ theụ n'ọganihu na teknụzụ ọdịyo nke oge a.
Hazie bass ahụ, treble na akara ngosi na onye na-ekwu okwu akwụkwọ na-arụ ọrụ hazie. Qualityda dị mma nke ewepụtara dị ka ndị ọkà okwu a na-ede akwụkwọ na-ewepụta etiti na-ada ụda nke na-eme ka onye nyocha ọ bụla. A na-etinye kọmpụta nwere njikwa dị mfe. Nwere ike idozi olu ma tọọ ndị na-ekwu okwu ka ogbi mgbe ọ dị mkpa na-enweghị iru ndị ọkà okwu; ike na izu oke na mkpịsị aka gị. The Edifier R1280T abịa na wuru na-ụda akara n'akụkụ nke nọ n'ọrụ ọkà okwu. Dabere na mmasị ahụ, ịnwere ike ịme mgbanwe micro nke treble na bass site na -6 ruo +6 db. A na-edozi njikwa olu dijitalụ na ọkwa dị mma oge ọ bụla ndị ọkà okwu na-akwado ya.
Ntinye aka RCA abuo
Ndị ọkà okwu ntanetị akwụkwọ BT-106 na-enye gị ohere ijikọ ọtụtụ ngwaọrụ ọdịyo site na iji ntinye RCA abụọ. Site na ilele anya n’azụ, ị nwere ike ịgwa otu n’ime ihe ndị a bụ ọkà okwu na-agbanwe agbanwe na otu onye bụ ọkà okwu na-arụ ọrụ. Ọkà okwu na-arụ ọrụ nwere ntinye abụọ dị na azụ. Ntinye ndị a zuru oke maka RCA ka RCA ma ọ bụ RCA ruo njikọ AUX. Jikọọ ha na PC, laptọọpụ, mbadamba, ekwentị ma ọ bụ ihe ndekọ egwu. Ndị na-ekwu okwu na-ejikọ ibe ha site na waya okwu mgbe niile. Varietydị eriri dị iche iche gụnyere na-eme ka ndị ahịa anyị nwee ọ enjoyụ na egwu ha site na ọtụtụ ngwaọrụ ozugbo.
Nke gara aga: Top mma MAXX BASS ihuenyo mmetụ ụda na 2.4G wireless subwoofer (SP-602 na subwoofer)
Osote: High Quality PC 2.0 USB TVgba Cha Cha TV ọkà okwu, Soundbar Bluetooth Ọkà Okwu (SP-600B)
Bluetooth Soundbar Wired na Ikuku
Obere Ikuku Bluetooth Ọkà Okwu
Portable Ikuku Bluetooth Ọkà Okwu
Factory Price Yi RGB Okwu Bluetooth W ...
2020 Unique imewe Multi-ọrụ mini soundbar ...
Portable USB mini Wired 2PCS desktọọpụ / laptọọpụ s ...
Factory Cheap Price 2.0 Obere Size Computer Spe ...
ODM rụpụta hifi ọkà okwu osisi n'ezinụlọ Hom ...
High Power Wooden Bookshelf Ọkà Okwu maka Home Th ...
WiFi Soundbar N'ihi Tv, Karaoke Soundbar, Ndị na-ekwu okwu Wifi Soundbar, Ugwu Tv na Soundbar, Alexa Soundbar, Tv Soundbars,